မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အတွက် ဘာတွေပေးကြမလဲ? – ADS Myanmar Blog
သီတင်းကျွတ်ကာလမှာ မင်္ဂလာဦးဇနီးမောင်နှံတွေအတွက် လက်ဖွဲ့ကြမယ့် Ads.com.mm ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ရွေးချယ်ရာမှာ စဉ်းစားနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာက အကြံပေးတွေပြောတဲ့ စုံတွဲတွေအတွက် မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ကြရာမှာ အများဆုံးလက်ဖွဲ့တတ်ကြတဲ့ ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်။ စုံတွဲတွေကို မိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက မင်္ဂလာဦးလက်ဖွဲ့ရာမှာ နိုင်ငံတကာမှာတော့ အများဆုံးလက်ဖွဲ့ကြတာက ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေလို့ဆိုပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခုက တီဗီတို့၊ DVD Player တို့လို ဖျော်ဖြေရေးပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ တတိယကတော့ ခရီးသွားလက်မှတ်တွေပါ။ သူတို့ဆီမှာတော့ အပန်းဖြေခရီးသွားတာက ခေတ်စားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အရင်ကဘုရားဖူးလောက်ပဲ သွားတတ်ကြပေမယ့် အခုတော့ ပြည်တွင်းရော၊ ပြည်ပကိုပါ အပန်းဖြေခရီးသွားတာတွေက ခေတ်စားလာနေတာပါ။ စတုတ္ထတစ်ခုကတော့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီး ပဉ္စမနေရာမှာ ရှိနေတာက ဓါတ်ပုံ Album လိုမျိုး အမှတ်တရ ပစ္စည်းတွေလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်း မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဖွဲ့တာ၊ လက်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်သုံးဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Ads.com.mm မှာ အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချနေသူတွေရှိတာမို့ ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။
အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်သုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကို Ads.com.mm မှာ ရှာဖွေဖို့ ဒီနေရာကို နှိပ်နိုင်ပါတယ်။
သီတငျးကြှတျကာလမှာ မင်ျဂလာဦးဇနီးမောငျနှံတှအေတှကျ လကျဖှဲ့ကွမယျ့ Ads.com.mm ရဲ့ ပရိတျသတျတှအေတှကျ မင်ျဂလာလကျဖှဲ့ရှေးခယျြရာမှာ စဉျးစားနိုငျဖို့ နိုငျငံတကာက အကွံပေးတှပွေောတဲ့ စုံတှဲတှအေတှကျ မင်ျဂလာလကျဖှဲ့ကွရာမှာ အမြားဆုံးလကျဖှဲ့တတျကွတဲ့ ပစ်စညျးတှအေကွောငျးကို ပွောခငျြပါတယျ။ စုံတှဲတှကေို မိဘဆှမြေိုးတှနေဲ့ သူငယျခငျြး၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေ မင်ျဂလာဦးလကျဖှဲ့ရာမှာ နိုငျငံတကာမှာတော့ အမြားဆုံးလကျဖှဲ့ကွတာက ပနျးကနျခှကျယောကျတှလေို့ဆိုပါတယျ။ ဒုတိယတဈခုက တီဗီတို့၊ DVD Player တို့လို ဖြျောဖွရေေးပစ်စညျးတှဖွေဈပါတယျ။ တတိယကတော့ ခရီးသှားလကျမှတျတှပေါ။ သူတို့ဆီမှာတော့ အပနျးဖွခေရီးသှားတာက ခတျေစားပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး အရငျကဘုရားဖူးလောကျပဲ သှားတတျကွပမေယျ့ အခုတော့ ပွညျတှငျးရော၊ ပွညျပကိုပါ အပနျးဖွခေရီးသှားတာတှကေ ခတျေစားလာနတောပါ။ စတုတ်ထတဈခုကတော့ မီးဖိုခြောငျသုံးပစ်စညျးတှဖွေဈပွီး ပဉ်စမနရောမှာ ရှိနတောက ဓါတျပုံ Album လိုမြိုး အမှတျတရ ပစ်စညျးတှလေို့ ဆိုပါတယျ။ ဆှမြေိုးသားခငျြး မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှကေို လကျဖှဲ့တာ၊ လကျဆောငျပေးတာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျတိုငျသုံးဖို့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ Ads.com.mm မှာ အိမျတှငျးနှငျ့မီးဖိုခြောငျသုံးပစ်စညျးတှကေို ရောငျးခနြသေူတှရှေိတာမို့ ဝငျရောကျလလေ့ာကွညျ့ဖို့ ဖိတျချေါခငျြပါတယျ။
အိမျနှငျ့ဥယြာဉျသုံးဆကျစပျပစ်စညျးတှကေို Ads.com.mm မှာ ရှာဖှဖေို့ ဒီနရောကို နှိပျနိုငျပါတယျ။
Author: Si Gee
Si Gee isaprofessional technology writer. In past, he worked as an editor at several tech related printed media. And he also worked atafew web startups companies and build many websites. Now he is working full-time at an media agency asadigital marketing strategist and still writing tech related articles, reviews and tutorials on various media asapart-time contributor.	View all posts by Si Gee
Author Si GeePosted on November 17, 2015 November 18, 2015 Categories Ads, Ads.com.mmTags Ads, Ads.com.mm, gift, wedding gift
Previous Previous post: အိမ်မပြောင်းခင် ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ
Next Next post: ကားချစ်သူတွေအတွက် Spectre ရုပ်ရှင်ထဲက Aston Martin DB10